Ny zavatra jerena ao La Gomera, iray amin'ireo tsara tarehy indrindra amin'ireo nosy Canary | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 11/10/2021 12:33 | España, nosy
Ny zavatra ho hita ao amin'ny La Gomera dia fanontaniana iray izay manontany tena ny olona maro izay miomana ny handeha amin'ity nosy Canarian ity. Lojika izany, satria izy no iray amin'ireo tsy dia fantatra amin'ity nosy Espaniola ity ary, mazava ho azy, tsy dia be mpitsidika noho i Tenerife (eto dia avelanay ianao lahatsoratra momba an'i Tenerife) na Gran Canaria.
La Gomera kosa dia tototry ny hatsaran-tarehy na aiza na aiza. nanambara ny Tahiry voajanahary amin'ny biosfera tamin'ny 2012, manolotra anao valan-javaboary voajanahary, tanàna kely feno hatsaram-panahy ary misy tsangambato mahaliana, torapasika mahatalanjona sy toetra tokana toy ny kiririoka vita amin'ny paty fanta-daza. Ity farany dia endrika fifandraisana taloha izay efa ampiasain'ny aborigines nosy ary efa nambara Lova eran-tany. Raha manontany tena ianao inona no ho hita ao amin'ny La Gomera, manasa anao izahay hanohy hamaky.
1 Inona no hitsidika an'i La Gomera: avy any Garajonay ka hatrany San Sebastián mahafinaritra
1.1 Valan-javaboary Garajonay
1.2 Tsangambato voajanahary hafa ho hitanao ao La Gomera
1.3 Ny morontsiraka tsara indrindra any La Gomera
1.4 Alajeró, eo anelanelan'ny tendrombohitra mametraka
1.6 Vallehermoso, tanàna lehibe indrindra ao La Gomera
1.7 Lohasahan'ny Mpanjaka Lehibe
Inona no hitsidika an'i La Gomera: avy any Garajonay ka hatrany San Sebastián mahafinaritra
Hanomboka ny fitsidihantsika an'ity Nosy Canary ity izahay mitsidika zava-boahary voajanahary toy ny Valan-javaboary Garajonay hanohy hahita toerana mahavariana ary hamita ao San Sebastián de la Gomera, renivohitry ny nosy.
Io fahagagana voajanahary io dia mitana mihoatra ny 10% ny nosy ary hita eo afovoany. Ilay valan-javaboary dia mahazo ny anarany avy amin'ny tampon'isa manjaka ao aminy, ny Garajonay, izay, sahabo ho XNUMX metatra ny haavony, dia ny haavon'ny avo indrindra amin'ny La Gomera.
nanambara ny Lova eran-tany, ity habaka voajanahary ity dia misy indrindra ala laurel, izay heverina ho tena relikin'ny natiora. Izy ireo dia mahazatra ny vanim-potoana fahatelo ary farany nanjavona saika na aiza na aiza. Izy ireo dia voaforon'ny fayas, heather, ferns ary laurels, indrindra.
Ny fomba tsara indrindra hahafantarana ity valan-javaboary ity dia an-tongotra. Làlana marobe voamarika tsara no mamakivaky azy. Ho fanampin'izay, ao anatiny dia manana ny faritra fialam-boly Big Lagoon ary amin'ny fotoana nantsoina Lalao baolina, an'ny fiadidian'ny fanjaitra, ho hitanao ny ivon'ny mpitsidika.
Tsangambato voajanahary hafa ho hitanao ao La Gomera
Cliff of Alajeró
Na izany aza, tsy i Garajonay no manintona voajanahary eto amin'ity nosy Canarian ity. Any avaratra no misy ny Valan-javaboary Majona, izay nipoiran'ny fikaohon-tany dia lohasaha lehibe ary manana karazana endemika.
Tsangambato voajanahary toy ny an'ny Roque Blanco, of Valahin'i Carretón na The Caldera. Ity farany no kônka volkano voatahiry tsara indrindra eto amin'ny nosy. Saingy, angamba, ny tena mahasarika ny sainao dia ilay Ny taova, endrika vitsivitsy amin'ny hantsam-bato izay mamerina ny fantson'ity fitaovana ity.
Raha fintinina, tsy afaka milaza aminao ny zava-mahatalanjona voajanahary rehetra hita ao La Gomera. Fa holazainay ihany koa ireo tahirin-javaboahary Puntallana sy Benchijigua, ilay faritra voaaro ao Orone, ireo toerana mahaliana ara-tsiansa ny Cliff of Alajeró sy Charco del Conde, ary koa ny valan-javaboahary ambanivohitra Valle Gran Rey, miaraka amin'ireo hantsam-bato sy lohasaha rakotry ny terraces.
Ny morontsiraka tsara indrindra any La Gomera
Morontsiraka La Calera sy harambato la Mérica
Tsy afaka milaza aminao ny zavatra ho hitanao ao La Gomera izahay raha tsy mijanona amin'ireo morontsiraka mahafinaritra. Izy rehetra dia manana fasika mainty, saingy tsy mampihena ny hakanton'izy ireo izany na atoro ho an'ny trano fidiovana. Raha ny tena izy, ny nosy dia manana ny sasany amin'ny tsara indrindra amin'ny Canaries (eto avelanay ianao lahatsoratra momba ny morontsiraky ny nosikely).
Any avaratry ny nosy no ahitanao ny morontsiraka La Caleta ao Hermigua. Roa metatra monja ny fasika volkano, fa vao mainka manome azy io kanto kokoa. Ankoatr'izay dia voaro amin'ny onja izy io, izay mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny filomanosana. Tena akaiky dia ny moron-dranomasin'i Santa Catalina, izay tonga lafatra ihany koa ho an'ny fanatanjahantena an-dranomasina toy ny surf, na dia manana dobo voajanahary tsara tarehy aza izy io. Fa, raha miresaka momba ireo karazana toerana ireo isika, dia mbola tsara kokoa noho ireo Valan-javaboary an-dranomasina Vallehermoso.
Mikasika ny atsimon'ny La Gomera, izahay dia manoro ny morontsirak'i La Calera ary ny anglisy ao amin'ny Valle Gran Rey. Ny voalohany amin'izy ireo dia tonga lafatra ho anao miaraka amin'ny ankizy noho ny onjany ambany, raha ny faharoa kosa dia heverina ho tsara indrindra eto amin'ny nosy. Eo am-pototry ny hantsana miavaka izy io ary mitazona ny rivotra virjiny. Etsy ankilany, any Alajeró dia manana ny moron-dranomasinao ianao Santiago, mety amin'ny filentika noho ny harenan'ny trondro, ary ao San Sebastián de La Gomera no ahitanao ny an'ny tanàna, ny an'ny La Guancha ary ny Cave, ity farany ity dia eken'ny tsangambaton'ny fanilo olympika.
Marina tokoa, morontsiraka nudiste i La Guancha, saingy tsy izy irery no nosy. Misy ihany koa ireo an'ny Tapahuga, Chinguarime, Argaga, El Guincho, El Cabrito ary las Arenas, ankoatry ny hafa.
Alajeró, eo anelanelan'ny tendrombohitra mametraka
Aorian'ny fitsidihantsika ny ampahany tsara amin'ny natioran'ny Nosy Canary, dia hitsidika ny tanànany sasany isika, izay tena ilaina amin'ny zavatra ho hita ao La Gomera. Hanomboka amin'ny Alajeró, izay eo anelanelan'ny tendrombohitra manintona isika (raha ny tena izy, faritra iray amin'ny zaridainan'i Garajonay no misy azy), saingy misy ny fidirana amin'ny ranomasina amin'ny hantsana mahatalanjona.
Alajeró dia fitsidihana saika voatery, satria amin'ny vanim-potoanan'ny kaomina dia ny Seranam-piaramanidina La Gomera. Na izany aza, azonao atao ihany koa ny mahita ny tsara tarehy eo an-toerana fiangonan'i Salvadaoro, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny Hermesy an'ny Tompovavintsika Virjiny ao El Paso, mpiaro ny tanàna.
Fahitana an'i Hermigua, iray amin'ireo tanàna azo jerena ao La Gomera
Any avaratry ny nosy no misy ity tanàna ity Tranombakoka Ethnographic an'ny La Gomera, fitsidihana tena ilaina raha te hahalala ny fomban-drazana ao amin'ny nosy ianao ary izany dia miaraka amin'ny valan-javaboary Los Telares. Azonao jerena ihany koa ny trano fivarotan'i Santo Domingo de Guzmán, natsangana tamin'ny 1598; ny hermitage of San Juan sy ny fiangonan'ny Fahatongavana ho nofo, tempoly tsara tarehy izay manambatra ny fomba neo-Gothic sy neo-Byzantine.
Fa ny mariky ny Hermigua dia ny Roques de Pedro sy Petra, volkano roa mahatalanjona manana ny angano manokana. Raha ny filazany dia mpankafy roa izy ireo izay navadika ho tora-bato.
Vallehermoso, tanàna lehibe indrindra ao La Gomera
View of Vallehermoso
Narovan'ny lehibe Roque Cano, ny tanànan'i Vallehermoso koa dia manana tsangambato voajanahary ao Los Órganos, izay efa noresahinay taminao. Fa ny fitsidihanao ny tanàna dia tsy maintsy atomboka amin'ny hatsarany Constitution Plaza, notarihin'ny Kaonsilin'ny tanàn-dehibe miaraka amin'ny lavarangana fampiasa Kanadiana sy feno bara.
Ary koa, tsy maintsy mahita ny fiangonan'i San Juan Bautista, tempoly neo-gothika tamin'ny taonjato faha-XIX; ny Botanical Garden of Discovery mahatalanjona, miaraka amin'ny karazany manerana an'izao tontolo izao sy ny sisa tavela amin'i Castillo del Mar. Ity farany dia ampahany amin'ny dock loading izay namboarina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX ho an'ny fanondranana akondro, izay ao koa ny ilay antsoina hoe Vallehermoso davit.
Lohasahan'ny Mpanjaka Lehibe
Eo am-pototry ny tendrombohitra manintona izay misy ny malaza kiririoka fingotra, Valle Gran Rey dia manolotra seranana fanjonoana sy fanatanjahantena tsara tarehy ho anao. Fa hitanao ihany koa eto amin'ity tanàna ity ny hermitage an'ny Mpanjaka Masina, natsangana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ary ny Fijery Palmarejo, noforonin'ny mpanakanto Lanzarote César Manrique ary manome anao fahitana mahatalanjona an'ity lohasaha mahafinaritra ity.
Tsy io irery no hitanao ao amin'ilay faritra. Raha ny marina dia La Gomera no nosy fijery. Manoro hevitra ihany koa izahay Santo, Curva del Queso ary La Retama. Farany, amin'ny alahady faharoa isam-bolana dia manana tsena asa tanana velona ianao ao an-tanàna.
Vita ny fitsidihanay ny nosy amin'ny renivohitra mahafinaritra. San Sebastián de la Gomera dia tanàna kely misy mponina manodidina ny iray alina izay feno famaliana. Izahay efa nilaza taminareo momba ny morontsiraka mahafinaritra, nefa manana tsangambato marobe koa izy io.
Ankoatr'izay, holazainay aminao fa izy tenany, amin'ny ankapobeny, dia manana andraikitra lehibe. Miakatra eo amin'ny havoana amoron-tsiraka izy ary feno arabe sy trano Kanadiana mahazatra. Manoro hevitra anao izahay hitsidika ny fiangonan'ny Lady's of the Assuming, izay niainga tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia noho ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo aza dia voatery namboarina imbetsaka. Na izany na tsy izany dia manambatra ny fomba Gothic, Mudejar ary Baroque izy io. Ankoatr'izay, ao anaty dia manana fresco mahafinaritra ianao.
Mandritra izany fotoana izany dia an'ny Count's Tower, noheverina ho mariky ny La Gomera. Namboarina tamin'ny vato fotsy sy mena izy io, ary fiarovana mimanda io izay nanjary toerana fandraisana olona. Amin'izao fotoana izao dia misy fampirantiana sary amin'ny nosy.
Tokony hitsidika ny Trano Columbus, tranobe tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mahazo an'io anarana io izy satria ny trano izay teo amin'ity tranokala ity taloha dia nampiasain'ny navigator ho fonenany alohan'ny niaingany ho any Amerika. Androany dia tranon'ny tranombakoka kanto kanto talohan'ny Columbian izy io.
Etsy ankilany, hermitage an'ny San Sebastián Niorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy ary misy ny sarin'ny olomasina izay manome ny anarany ary iza no mpiaro an'i La Gomera. Fa vao mainka tsara tarehy kokoa ny tranon'ny fantsakana ao Aguada na Fadintseranana. Voalaza fa nisotro ny rano nitahiany an'i kontinanta vaovao i Columbus. Misongadina amin'ny fomba nentim-paharazana kanarianina izy ary amin'izao fotoana izao dia manana tranombakoka natokana ho an'ny dian'ny amiraly.
Plaza de América, any San Sebastián de La Gomera
Maro amin'ireo tsangambato ireo no ao amin'ny tena arabe, ny zava-dehibe indrindra ao San Sebastián de la Gomera. Izy io dia mpandeha an-tongotra ary feno fivarotana, trano fisotroana ary trano fisakafoanana. Fa, ambonin'izany rehetra izany, dia misy trano kanarianina marobe toa an'i Los Quilla, Los Condes na Casa Darias.
Farany, amin'ny tranobe taonjato faha-XNUMX dia manana an'io ianao Tranombakoka arkeolojika ao La Gomera, izay manana fialamboly amin'ireo alitara any Guanche sy singa hafa amin'ny kolotsaina aboriginaly nosy.
Ho famaranana, izahay dia nanao famerenana taminay ny zava-drehetra inona no ho hita ao amin'ny La Gomera. Araka ny ho hitanao, dia nosy mahafinaritra izay hahitanao ny tontolo voajanahary tsara tarehy, torapasika mangina ary lova mampiavaka mahaliana. Izao dia mila mamporisika ny tenanao fotsiny ianao hitsidika azy ary hilaza aminay ny fomba nandanianao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » nosy » Inona no ho hita ao amin'ny La Gomera